MBA HAHA-ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA
Ny vola lany amin’ny ny fakan-kevitra ao amin’ny biraon’ny — avy. Ny vidiny ara-dalàna ny toro-hevitra dia tsy mihoatra ny eo ho eo ao amin’ny tsena ara-dalàna ny asa. Ao ny raharaha ny fifanarahana miaraka aminay, mba hanao ny raharaha, ara-dalàna ny toro-hevitra dia maimaim-poana.
Torohevitra araka ny lalàna dia aloa amin’ny vidin’ny tapa-kevitra tsirairay avy, rehefa avy nandray ny mpisolovava ny orinasa rehetra ny tahirin-kevitra ilaina ny famaritana.
Ny antontan-kevitra azo no ho foana toy ny tsiambaratelo, misy karazany maro ny manam-pahaizana manokana sy ampiasaina ho an’ny tanjona iray, fotsiny mba hanombanana ny asa.
Am-bava ara-toro-hevitra, toy ny fitsipika, iray amin’ny fanontaniana ny valiny izay mitaky tsy mihoatra ny ora. Ny vola lany mpanoratra ny fakan-kevitra dia miankina amin’ny tranga tsirairay mifototra amin’ny maha-sarotra ny fanontaniana na ny toetry ny olana, ny fe-potoana avy amin’ny iray na roa andro fiasana manomboka amin’ny daty ny fifanarahana sy ny fandoavana.
Ny vidiny dia miankina amin’ny ny be pitsiny ny resaka, ny tsy fankatoavana (am-bava, ny fitsipika nosoratana na amin’ny antsipiriany manoratra — no tapa-kevitra miaraka amin’ny mpanjifa), ny isan’ny fanontaniana, ao anatin’ny fotoana voafetra izay mila mahazo toro-hevitra, ary koa ny endri-javatra manan-danja hafa.
Ara-dalàna ny orinasa dia manolotra ny asa fanompoana fanampiny — ny fialan’ny ny mpisolovava ny fitondran-tena am-bava ny fizahana eo amin’ny olana ara-pitsarana, ary koa ny hahazo vaovao sy ny antontan-taratasy, raha ilaina.
Ny asa fanompoana mitaky ny fialan’ny ny mpisolovava ny birao, ny trano, sns. d.
Izany fanompoana izany dia tsy mahaleotena
Ny fialan’ny ny mpahay lalàna any Holandy tafiditra ao amin’ny fandaniana ara-dalàna ny toro-hevitra. Ny fialan’ny ny mpisolovava ivelan’ny Pays-bas dia tsy tafiditra ao amin’ny vidin’ny consulting services, ary dia miankina amin’ny ny elanelana
ADIRESY ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA